जिग्रीले जन्माएको ‘पाँणे’ झण्डै खुस्किएन ! – तहल्काखबर
काठमाडौं / शनिवारलाई ‘फुर्सदको समय’ मान्छन् शहरमा बस्नेहरु । अरु दिन सबैरै अफिस पुग्न पर्नेहरु पनि शनिवार अवेरसम्म उठ्दैनन् । विद्यार्थीदेखि अन्य कतिपय अभिभावकसमेत शनिवार मस्तीका साथ बिताउँछन् ।
‘मलाई त यसरि हुलमा मिसिएर काम गर्दा सार्‍है रमाइलो लाग्छ । गाउँमा पर्म लगाएको याद आउँछ’, घिमिरेले भने ।
सन्तोष पन्तको दर्शन
स्कुल पढ्दा निकै सक्रिय थिए घिमिरे । नाच्न, गाउन र नाटक गर्न खुब रमाइलो लाग्थ्यो । स्कुलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा जति नै राम्रो गरेपनि चर्चा स्कुलमै सिमित हुन्थ्यो ।
सोही कारण घिमिरे करिअरको खोजी गर्दै काठमाडौं आए । सन्तोष पन्तको ‘हिजो आजको कुरा’ निकै चर्चित थियो । टिभीमा कार्यक्रम हेरेर लोभिएका घिमिरेले सुटिङ स्पट पत्ता लगाए । केही साथीसहित उनी सुटिङ स्पटमा पुगे, रमा थपलिया अभिनय गरीरहेकी थिइन् । घिमिरेको ग्रुपले टाढा बसेर सुटिङ हेर्‍यो तर, निर्देशक पन्तसंग गफ गर्ने हिम्मत गरेन । घिमिरेलाई अहिले पनि सम्झना छ ।
‘चार महिना त हामीले सन्तोष पन्तलाई हेर्‍यौं मात्रै’, उनले भने ।
जिग्रीले जन्माए पाँणे
उनको त्यही गेटअप दर्शकले भने मन पराए । सिरियल प्रशारण भएको लगभग सात महिनापछि उनले दार्‍ही टाँस्ने काम पनि छाडिदिए ।
‘आफ्नै नेचुरल दार्‍ही आएपछि अहिले नक्कली दार्‍ही टाँस्न छाडें’, उनले भने ।
झण्डै प्राण खुस्कीएन
मुड्कु भन्ज्याङमा राती दुई बजे सुटिङ हुँदै थियो । सुटिङमा बिरामीको प्रसंग थियो । उनीहरु सुटुक्क सुटिङ गर्दै थिए । गाउँलेहरु आइपुगे, ‘कसलाई के भयो ?’ भन्दै ।
‘हामी सुटिङ गर्दै थियौं तर, गाउँलेहरुले हाम्रै साथी बिरामी भएको ठानेछन्’, घिमिरेले भने ।
दुःखका कुरा कति हो कति । गरिसाध्यै र भनिसाध्यै छैन ।
‘यी सारा दुःख त्यतिवेला दुर हुन्छ जब कुनै कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति हेर्न भन्दै हजारांै दर्शक सहभागी भएका हुन्छन्’, घिमिरेले भने । #अनलाइनखबर
← कहाँबाट आउँदैछन् ७ वटा संसद चलाउने ३५० कर्मचारी ?
यस्तो समाधीस्थल, जहाँ फूल होइन चुरोट चढाइन्छ →